Lisitry ny lisitry ny fananganana sy ny marketing ny fampiharana findainao | Martech Zone
Ireo mpampiasa rindranasa finday dia matetika mirotsaka an-tsehatra, mamaky lahatsoratra marobe, mihaino podcast, mijery horonan-tsary ary mifanerasera amin'ny mpampiasa hafa. Tsy mora ny mampivelatra traikefa amin'ny finday izay mandeha!
Lisitry ny fizahana 10-dingana hananganana sy fivarotana fampiharana mahomby manome ny antsipirihany ny fizotran'ny hetsika ilaina - tsikelikely manomboka amin'ny foto-kevitry ny fampiharana hanombohana - hanampiana ireo fampiharana hahatratra ny fahafenoany feno. Miasa ho maodely fandraharahana ho an'ny mpamorona sy fanantenana feno famoronana, ny infographic dia misy naoty fototra sy ny toeram-pisavana ary koa torohevitra momba ny fahombiazana amin'ny ankapobeny.
Ny lisitry ny lisitry ny fampiharana amin'ny finday dia misy:
Paikady fampiharana amin'ny finday - ny anarana, ny lampihazo ary ny fomba ahitanao vola miditra aminy.
Famakafakana fifaninanana - iza no any ivelany, inona no ataon'izy ireo ary tsy ataony izay mety hanavaka ny fampiharana findainao?
Fananganana tranokala - aiza no hampiroboroboanao ny rindranasa, apetraho ny bokotra apetraka ho an'ireo mpampiasa finday, na ampidiro ny fampahalalana meta mampiseho ny fampiharana anao?
Fananganana ny fampiharana - ahoana no ahafahanao manatsara ny endriny ho an'ny mpampiasa sy ny fitaovana ary mampiditra azy eo amin'ny fiaraha-monina?
Fitsapana ny mpampiasa finday - mamoaka kinova beta amin'ny alàlan'ny fitaovana toa anao fitsapana sidina hamantatra ny bibikely, hangataka valiny ary hijery ny fampiasana ny fampiharana anao.
Optimization App Store - ny pikantsary sy ny atiny omenao amin'ny fivarotana fampiharana dia afaka manisy fahasamihafana lehibe amin'ny fampidiran'ny olona azy na tsia.
Famoronana marketing - Inona avy ireo horonan-tsary, tranofiara, sary ary infografika azonao zaraina izay mampiroborobo ny fampiharana findainao?
Hetsika amin'ny haino aman-jery sosialy - Mety ho niantso an'ity fampiroboroboana ity fotsiny aho ary nanakambana azy tamin'ny zava-boary, saingy mila mizara matetika ny fahaizan'ny fampiharana eo amin'ny fiaraha-monina ianao… izay hividiananao mpampiasa marobe.
Press Kit - Famoahana gazety, pikantsary, mombamomba ny orinasa ary lisitry ny tranokala kendrena hilaza fa tonga ny fampiharana anao!
Tetibola amin'ny marketing - Nanana teti-bola fampandrosoana ianao… inona ny tetibola ho an'ny marketing amin'ny fampiharana anao?
Ity dia lisitra tsara fa misy dingana CRUCIAL roa tsy hita:
App Reviews - Ny fangatahana fanamarihana avy amin'ireo mpampiasa rindranasa finday dia tsy vitan'ny hoe hanampy anao hanatsara sy hanatsara ny kinova manaraka amin'ny fampiharana anao, fa hampiakatra fampiharana be loatra eo an-tampon'ny laharana fampiharana finday koa.
Fampisehoana fampiharana - Fanaraha-maso ny zava-bitan'ny rindranasao amin'ny alàlan'ny App Annie, SensorTower, na AppFigures hanaraha-maso ny laharanao, ny fifaninanana, ny fanodinam-bola, ary ny fanamarihana dia fanalahidy hanatsarana ny fahombiazan'ny fampiharana findainao.
Tags: fampiharana appieappfiguresmanangana fampiharana findaylisitrafampiharana finday tsenafinday fampiharanabokotra fampiharana findaymifanentana amin'ny fampiharana findayfamakafakana fifaninanana fampiharana findayfamolavolana fampiharana findayteti-bolan'ny marketing amin'ny findayfampiharana ny findaysehatra fampiharana findaykitapo fanaovan-gazety findayfampiharana finday sdkfampiharana ara-tsosialy fampiharanafanatsarana fivarotana app mobilepejy fivarotana fampiharana findaypaikadin'ny fampiharana findayfitsapana ny mpampiasa fampiharana findaysensortowertestflight